အမိုက်စား ကကွက်တွေနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အလန်းစား ကပြလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Real Link
အမိုက်စား ကကွက်တွေနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အလန်းစား ကပြလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
မကြာသေး မီက လည်း နေခြည်ဦး ဟာ သူမ ရဲ့ Tok acc လေးမှာ အင်္ဂလိပ် သီချင်း မြူးမြူးလေး နဲ့ အမိုက်စား ကထား တဲ့ ဗီဒီ ယိုလေး ကို တင် ပေးလာ ပြန်ပါ တယ်..။ နေခြည် တစ်ယောက် ကတော့ သီချင်း အတိုင်း လုံးဝ စည်းချက်ညီညီ နဲ့ ကနေ တာ ပါ..။ ကဲ. ….ပရိ သတ်တွေ အတွက် နေခြည့်ရဲ့ tik tokဗီဒီယို လေး ကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါ တယ် နော်..။ပရိတ်သတ် ကြီးရေ….သွက်လက် တဲ့ အမူ အရာလေးတွေ နဲ့ အများနဲ့ မတူတဲ့ ချစ်စရာ ဟန်ပန် လေးတွေ နဲ့ ပရိတ်သတ် တွေ ရင်ထဲ မှာ နေရာ တစ် နေရာ ရရှိလာ တဲ့ နေခြည်ဦး ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ် နော်..။ သူမ ဟာ beauty blogger တစ်ယောက် အနေ နဲ့ စတင်လာ ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ social influencer တစ်ယောက် အနေ နဲ့ ပါ ရပ်တည်တဲ့ သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်..။
ဒါ့ပြင်ေ နခြ ည် ဟာ မင်းသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ လည်း အနုပညာ လမ်းကြောင်း ပေါ် ရောက်ရှိ နေပြီ ဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကား ကြီး တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေ ထိပါ ‌ရိုက်ကူး လာ နိုင်တဲ့ သူ ဆို လည်း မမှား ပါဘူး နော်..။နေခြည် ဟာ အနုပညာ အလုပ်တွေ ကို ဆက်တိုက် ဆို သလို လုပ်ဆောင် နေတာ ဖြစ်ပြီး အောင်ရဲလင်းနဲ့ အတူ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင်ထား တဲ့ music video (၃)ခု ဟာဆိုရင် လည်း အခု လက်ရှိမှာ ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ ရေပန်းစား အောင်မြင်နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် နော်..။ နေခြည် ဟာ အားလပ်ချိန် လေးတွေ မှာ ဆိုရင် လည်း tik tok ဗီဒီယိုလေး ကို မျိုးစုံရိုက်ကူးလေ့ ရှိ‌ပါေ သးတယ် နော်…။
Source& video Credit-Nay Chi Oo’s Tik tok acc
မၾကာေသး မီက လည္း ေနျခည္ဦး ဟာ သူမ ရဲ့ Tok acc ေလးမွာ အဂၤလိပ္ သီခ်င္း ျမဴးျမဴးေလး နဲ႔ အမိုက္စား ကထား တဲ့ ဗီဒီ ယိုေလး ကို တင္ ေပးလာ ျပန္ပါ တယ္..။ ေနျခည္ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ သီခ်င္း အတိုင္း လုံးဝ စည္းခ်က္ညီညီ နဲ႔ ကေန တာ ပါ..။ ကဲ. ….ပရိ သတ္ေတြ အတြက္ ေနျခည့္ရဲ့ tik tokဗီဒီယို ေလး ကို ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ပါ တယ္ ေနာ္..။ပရိတ္သတ္ ႀကီးေရ….သြက္လက္ တဲ့ အမူ အရာေလးေတြ နဲ႔ အမ်ားနဲ႔ မတူတဲ့ ခ်စ္စရာ ဟန္ပန္ ေလးေတြ နဲ႔ ပရိတ္သတ္ ေတြ ရင္ထဲ မွာ ေနရာ တစ္ ေနရာ ရရွိလာ တဲ့ ေနျခည္ဦး ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါ တယ္ ေနာ္..။ သူမ ဟာ beauty blogger တစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ စတင္လာ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲ့ ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲ social influencer တစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ ပါ ရပ္တည္တဲ့ သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါ တယ္..။
ဒါ့ျပင္ေ နၿခ ည္ ဟာ မင္းသမီး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ လည္း အႏုပညာ လမ္းေၾကာင္း ေပၚ ေရာက္ရွိ ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကား ႀကီး ေတြ၊ ဇာတ္လမ္းတြဲ ေတြ ထိပါ ‌ရိုက္ကူး လာ နိုင္တဲ့ သူ ဆို လည္း မမွား ပါဘူး ေနာ္..။ေနျခည္ ဟာ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကို ဆက္တိုက္ ဆို သလို လုပ္ေဆာင္ ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ရဲလင္းနဲ႔ အတူ တြဲဖက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထား တဲ့ music video (၃)ခု ဟာဆိုရင္ လည္း အခု လက္ရွိမွာ ဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြ ၾကားမွာ ေရပန္းစား ေအာင္ျမင္ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္..။ ေနျခည္ ဟာ အားလပ္ခ်ိန္ ေလးေတြ မွာ ဆိုရင္ လည္း tik tok ဗီဒီယိုေလး ကို မ်ိဳးစုံရိုက္ကူးေလ့ ရွိ‌ပါေ သးတယ္ ေနာ္…။
Previous post လုံးတင်းပြီး လှပကျော့ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိစွာ မိမိုက်လွန်းနေပြန်တဲ့ အိချောပိုရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ မိမိုက်လွန်းနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယိုလေး